लक्ष्यभन्दा रु ४७ करोड बढी राजश्व सङ्कलन
२२ कात्तिक, काठमार्डाैँ । सानो भ¥याङस्थित प्रदेश नं ३ को यातायात व्यवस्था कार्यालयले आव २०७५/०७६ मा रु एक अर्ब ४७ करोड राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।
कर्यालयले रु एक अर्ब राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा थप रु ४७ करोड वृद्धि भएको जनाएको हो । सवारी साधन कर सङ्कलन, यातायात क्षेत्रको आम्दानी, चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता किताब लगायत शीर्षकमा राजश्व सङ्कलन बढेको कार्यालय प्रमुख राजकुमार कपालीले जानकारी दिए ।
असारदेखि असोजसम्म सवारी साधनको नवीकरण लगायत कार्य बढ्ने हुँदा सेवाग्राहीको भीड लाग्ने सो कार्यालयमा कामको चाप बढेका बेला राति ९ बजेसम्म पनि काम गर्नुपरेको बताइएको छ । कम्पाउण्ड सहितको भवन नभएकाले कार्यालय हातामा सेवाग्राहीलाई बीमा कम्पनीका प्रतिनिधि तथा विचौलियाले विभिन्न प्रलोभन देखाएर ठगी गर्ने गरेकाले सिसी क्यामेराको सहयोगबाट निगरानी गरी प्रहरीको समन्वयमा कारवाही समेत गरिएको प्रमुख कपालीले जानकारी दिए । उक्त कार्यालयले दैनिक एक हजार २०० सेवाग्राहीलाई सेवा दिएको जनाएको छ ।
पुनः घट्यो सुनको मूल्य, आज कति पुग्यो त प्रतितोला ?
१३ फागुन, काठमाडौँ । उच्च भाउमा कारोबार भैरहेको सुनको मूल्य…
कति तोकेको छ त राष्ट्र बैंकले आजको बजारमा विदेशी मुद्राको विनिमय दर ?
१४ फागुन, काठमाण्डौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजको बजारमा विदेशी…
शेयर बजारमा उच्च अङ्कको वृद्धि, एकै दिनमा दुई अर्ब ९९ करोडमाथिको कारोबार
घट्यो सुनको मूल्य, हेर्नहोस् प्रतितोला कतिमा कारोबार हुँदै छ ?
हेर्नुहोस् यस्तो छ आजको बजारमा विदेशी मुद्राको विनिमय दर
सेयर बजार झिनो अंकले घट्यो, बैकिङ क्षेत्र अझै मजबुद ।